Praiminisitra Ntsay Christian: “Misy fanavaozana marobe alohan’ny asa” | NewsMada
Praiminisitra Ntsay Christian: “Misy fanavaozana marobe alohan’ny asa”
“Tao anatin’ny 11 volana izay, efa betsaka ny sahan’asa natomboka. Hitantsika sy tsapantsika izany, ary nanambara sahady ireo solombavambahoaka niteny fa be dia be ny vavasa natomboka eto amin’ny firenena.”. Anisan’ny valin-tenin’ny Praiminisitra Ntsay Christian, teny Tsimbazaza, omaly, tamin’ny fifanatrehan’ny Antenimierampirenena sy ny governemanta.
Nanontany koa ireo depiote : maninona no tsy mbola nanomboka ny asa any amin’ny distrika misy azy ireo avy? Koa ny Drafitra fisandratan’i Madagasikara, tetipivoaran’ny firenena no hamaly ny amin’ny asa hatao amin’ny taona 2020, 2021… Fanombohana ny natao amin’izao fa ho hita amin’ny antsipiriany ny asa rehetra hotanterahina miainga amin’ny tetipivoarana.
Mety mahavaly amin’ny ankapobeny ny ahiahy izy io. Eo koa ny fanontanian’ireo depiote : inona avokoa ny ataon’ny fitondrana, amin’ny fotoana rahoviana ary amin’ny toerana aiza ?
Ilaina ny tontolo mety amin ’ny asa atao
“Ny natao hatramin’izao, tsy maintsy niainga tamin’ny fanavaozana maro ireo tetikasa sy vavasa natomboka”, hoy izy. Tsy maintsy natao izany hametrahana tontolo hahazoana manatanteraka ny Politika ankapoben’ny fanjakana (PGE), avy amin’ny tetipivoarana eo am-pamolavolana azy amin’izao. Niainga tamin’ny vinan’ny filohan’ny Repoblika izany, nentiny teo amin’ny vahoaka ka nahavoafidy azy.
Anisan’ny fanavaozana natao, ohatra, ny lalàna mifehy ny fanajariana ny tany, ny asa any amin’ny banky, ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany… Takin’ny vanin’andro amin’izao ny fomba fijery vaovao. Tsy hita mivaingana ireny nefa asa marobe tsy maintsy tanterahina.